जनकपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभा : विमलेन्द्र निधि भने लागे धरानतिर
काठमाडौं : धनुषाको जनकपुरमा आज दुई बजे कांग्रेसले चुनावी सभा गर्दैछ। चुनावी सभालाई कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत जनकपुर पुगिसकेका छन्। तर उक्त सभामा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि भने उपस्थित नहुने…
जनकपुरमा हुने कांग्रेसको चुनावी सभामा विमलेन्द्र निधि नजाने
काठमाडौं : धनुषाको जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चुनावी सभामा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि नजाने भएका छन्। बैशाख २४ गते जनकपुरमा तय गरेको चुनावी सभालाई कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय वक्ताको सूचीमा पूर्व उपसभापति निधिको नाम राखिएको छैन।…
कांग्रेस अधिवेशनस्थल बन्यो रणभूमि : जनकपुरमा शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि पक्षधर नेता कार्यकर्ताबिच कुटाकुट
प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि कता ?
काठमाडौं, ६ पौष । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रतिष्पर्धामा पराजित भएपनि प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि दोस्रो चरणको प्रतिष्पर्धामा निर्णायक शक्ति देखिए । उनीहरुकै निर्णयले शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । सिंह र निधिको राजनीतिक भविष्यबारे कतिपयले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, सिंहको काँग्रेस राजनीतिमा काठमाडौं उपत्यकामा बलियो पकड कायमै देखिएको छ । […]
विमलेन्द्र निधि पनि पुगे मनोनयन गर्न
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी विमलेन्द्र निधि मनोनयन दर्ताका लागि सभागृह पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति पदका लागि सबैभन्दा पहिलेदेखि तयारी गरेका निधि यसअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर निकट नेता हुन्। यसपाला उनले देउवाविरुद्ध चुनावी अभियान अगाडि बढाएका थिए। सभापति पदमा नै उम्मेद्वारी दिन नेता प्रकासमान सिंह र शेखर…
सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउन सभागृह पुगे विमलेन्द्र निधि
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी विमलेन्द्र निधि मनोनयन दर्ताका लागि राष्ट्रिय सभागृह पुगेका छन्। महिनौं अघि नै सभापति पदमा नै उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका उनी सभागृह पुगेका हुन्। सभापतिका लागि प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्।
कांग्रेस कार्यबाहक सभापतिमा विमलेन्द्र निधि
काठमाडौँ – उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बनेका छन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू बेलायत भ्रमणमा जानुअघि उपसभापति निधिलाई पार्टीको कार्यबाहक सभापति तोकेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि ९कोप–२६० पक्षको २६ औँ सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटका लागि आज बेलायत गएका छन्। जसअनुसार उपसभापति निधिलाई कार्यवाहक […]
प्रदीप गिरिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न विमलेन्द्र निधि मुम्बई जाँदै
काठमाडौं, भदौ ३ । मुम्बईमा स्वास्थ्य उपचार गराईरहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरिलाई भेट्न कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि आज त्यहाँ जाने भएका छन् । नेता गिरिको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हाल मुम्बईको हिन्दुजा अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । गिरिको घाँटीमा समस्या देखिएको छ । उनलाई डाक्टर सुल्तान प्रधान नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले उपचार गरिरहेको छ । […]
नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा चलिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेपाल काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि भारत पुगेका छन् । निधिको निजी सचिवालयले उनी भारतको गएको पुष्टि गरेको छ ।‘वहाँ पारिवारिक कामले भारत जानु भएको हो । आज बिहान काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम तय थियो । तर, विमानमा सिट नपाएका कारण वहाँ काठमाडौँबाट बिराटनगर अनि त्यहाँबाट सिलिगुडी हुँदै कलकता जानुभएको हो । वहाँको ससुराली त्यहीँ हो । वहाँको जेठानले बोलाउनुभएकोले जानुभएको हो । वहाँ भोलिसम्म बस
शशांक निवासमा विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह सहितको छलफल
आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने बताएका नेपाली कांग्रेसका तीन नेता उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहबीच छलफल चलिरहेको छ । महामन्त्री कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा शुक्रवार मध्यान्ह छलफल भइरहेको शशांकका पीए भरत तिवारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । यी तीन नेताले केही दिन पहिले निधिको निवास बानेश्वरमा छलफल गरेका थिए । पार्टीको महाधिवेशनकै विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।